Hoggaamiyeyaasha dalalka Raashiya iyo Jarmalka oo kulan khaas ah yeelanaya | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Hoggaamiyeyaasha dalalka Raashiya iyo Jarmalka oo kulan khaas ah yeelanaya
Hoggaamiyeyaasha dalalka Raashiya iyo Jarmalka oo kulan khaas ah yeelanaya
Madaxweynaha Raashiya, Valadamir Putin waxa uu bishan 20da magaalladda Mosko kula kulmi doonaa Haweeneyda Ra’isul-wasaaraha ka ah Jarmalka, Angela Merkel.
Hadal ka soo baxay Madaxtooyada Raashiya ee Keremiliinka ayaa lagu sheegay inay Labada Hoggaamiye ka wada xaajoon doonaan Iskaashiga Labada dal , Isdhaafsiga Dhacdooyinka Caalamiga iyo kuwa Gobaleedka ee ka hadalka u baahan.
Ajendayaasha wada hadalka Putin iyo Angel Merkel waxaa kaloo ka mid ah dhuumaha Gaaska Dabiiciga, Mashruuca Tamarta ee Labada dal iyo Khilaafka Maraykanka ee Dhismaha Dhuumaha Gaaska ee isku xirayo Raashiya iyo Jarmalka.
Dhinaca kale, RW Jarmalka waxay bishan 22-da booqan doontaa caasimada dalka Ukrayn ee Kiyeef, iyadoo Madaxweynaja dalkaasi, FOLODMAYIR ZELENISKI kala hadli doontaa Arrimaha Ammaankaiyo Xiriirka labada dal.
Maqaal hore-Diyaarad siday Gaadiid oo ka degtay Magaalada Baladweyne
Maqaal XigaQoorqoor oo dhaliilay dad wax ka sheegay Doorashadii Aqalka Sare ee Galmudug